Agwaetiti Yas Island Etihad Arena na -anabata kpakpando Bollywood Arijit Singh
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Entertainment » Agwaetiti Yas Island Etihad Arena na -anabata kpakpando Bollywood Arijit Singh
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • omenala • Entertainment • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • India na -agbasa ozi ọma • Akụkọ okomoko • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Ịzụ ahịa • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ na -agbasa UAE • Akụkọ dị iche iche
Ọdịdị onye ama ama nke Bollywood pụtara na Yas Island ga -abụ egwu izizi ya na isi obodo UAE ruo afọ ise.
Onye ama ama ama ama na Bollywood, Arijit Singh, ga -eme egwu na Etihad Arena na Nọvemba 19, 2021.
Nke a ga -abụ egwu mbụ Singh na UAE n'ime afọ ise.
A ga -echekwa usoro ahụike na nchekwa siri ike ebe niile.
Agwaetiti Yas Abu Dhabi, otu n'ime ebe ezumike na ntụrụndụ ụwa na -ebute ụzọ, na mmekorita ya na Ngalaba Omenala na Njem Nleta - Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi), na Pọtụfoliyo Na -ahụ Maka Ihe Omume (PME), ga -anabata onye na -agụ egwu Bollywood ama ama, Arijit Singh. , iji mee na Etihad Arena na Nọvemba 19, 2021. Ndị na-akwado mega-kpakpando Bollywood nọ maka ahụmịhe a na-agaghị anabata ma emechaa n'afọ a.
Otu n'ime ndị na -agụ egwu nke ukwuu n'oge a, mpụta Singh na agwaetiti Yas ga -abụ egwu izizi ya na isi obodo UAE ruo afọ ise. Ọ ga na-eme ihe nkiri n'ọgbara ọhụrụ Etihad Arena, ebe egwuregwu ime ụlọ kacha ibu na Middle East.
N'iji olu ya na Cinema India, onye na -agụ egwú Bollywood na onye na -ede abụ ga -eme ọtụtụ egwu ya ama ama, gụnyere 'Tum Hi Ho', 'Kabira', 'Ae Dil Hai Mushkil', na ndị ọzọ, yana ọtụtụ ndị egwu ụwa niile. isonyere ya na ogbo.
"Ebumnuche anyị nke afọ a bụ iweghachite ihe omume na ihe nkiri na -atọ ụtọ karịa na isi obodo UAE maka ndị bi na ndị ọbịa ịnụ ụtọ, ọ na -atọkwa anyị ụtọ ịhazi ihe omume a pụrụ iche," HE HE Ali Hassan Al Shaiba, Onye isi oche nke Njem nleta na ahịa na DCT Abu Dhabi. "Arijit Singh bụ onye omenkà mara mma nke na -amasịkarị ndị na -ege ya ntị na arụmọrụ ya, nke na -eme ya nnukwu nhọrọ maka egwu egwu na Etihad Arena na agwaetiti Yas. Ndị na -egwu egwu na -abịa nwekwara ike ịnụ ụtọ usoro mmegharị na onyinye dị na agwaetiti Yas, na -enye ha ahụmịhe ntụrụndụ kacha mma n'oge ememme ahụ, ebe ịhụ na nchekwa nke ndị ọrụ, ndị bi na ndị ọbịa bụ ihe kacha mkpa. "
A ga -edobe usoro ahụike na nchekwa siri ike ebe niile, dịka ntuziaka gọọmentị ugbu a siri dị. Tụkwasị na nke a, emepụtara oche oche maka ezinụlọ na ndị enyi ka ha nọrọ na egwu egwu n'enweghị ihe ọ bụla ebe a na -adọpụ ndị mmadụ site na otu ndị ọzọ bịara. A ga -ebelata ikike ịnọdụ ala na Etihad Arena site na nhazi oche pod. Dị ka mkpachapụ anya ọzọ, mkpuchi ihu bụ iwu maka ndị ọbịa niile belụsọ mgbe ha na -eri nri ma ọ bụ na -a inụ n'oche ha, dịka ntuziaka gọọmentị siri dị. Ndị ọbịa sitere na 12-16 afọ ga-achọ nnwale PCR na-adịghị mma yana ikike elekere 48. A ga-agbarịrị ndị ọbịa gbara afọ 16 na karịa ịgba ọgwụ mgbochi ọ bụla ma gosipụta ọnọdụ "E" ma ọ bụ "*" na ngwa Al Hosn yana ule PCR na-adịghị mma yana ikike awa 48.